ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး အထိုးခံၿပီး တဲ့ ျမန္မာ ဆရာဝန္တဦး ေျပာျပတဲ့ ကာကြယ္ေဆး အေၾကာင္း – Shwe Sar
Pfizer ကုမၸဏီထုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားနဲ႔ ဓါတ္မတည့္သူမ်ား၊ ရက္ ၉၀ အတြင္း ကိုဗစ္ ျဖစ္ဖူးသူမ်ား၊ ကိုဗစ္ သံသယ လူနာမ်ား၊ ကိုယ္ခံအားနည္း ေရာဂါရွင္မ်ား၊ ေသြးက်ဲေဆး ေသာ က္ေ နသူမ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါအုပ္စုမ်ားမွာ ဆရာဝန္ေထာက္ခံလွ်င္ ေဆးထိုးႏိုင္ပါတယ္။
ကာကွယ်ဆေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဘယ်သူတွေ ထိုးနိုင်လဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ ဆိုတာကို မြန်မာလို အတိုချုပ် ဘာသာပြန်ရေးသား လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Pfizer ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်−၁၉ ကို တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် လူ ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံ စမ်းသပ်ချက်အရ ဆေးထိုးထားလျှင် ကိုဗစ်ရော ဂါ ကို ၉၅ % တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၇၀% ထက် များစွာပိုကောင်းပါတယ်.)
ကာကွယ်ဆေးကို ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများတွင် ၂၁ ရက်ခြားပြီး ၂ ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဆေး ‘မ’ ထိုးသင့်သူများ
Pfizer ကုမ္ပဏီထုတ် ကာကွယ်ဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူများ၊ ရက် ၉၀ အတွင်း ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးသူများ၊ ကိုဗစ် သံသယ လူနာများ၊ ကိုယ်ခံအားနည်း ရောဂါရှင်များ၊ သွေးကျဲဆေး သောက်နေသူများ၊ နို့တိုက်မိခင်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မှတ်ချက်။ အထက်ပါအုပ်စုများမှာ ဆရာဝန်ထောက်ခံလျှင် ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
(၄) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင် (သို့) အောင့် နေခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့် နေရာတွင် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖျားငွေ့ငွေ့တက်ခြင်း၊ နွမ်းလျခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ကျနော်ကို ယ် တိုင် ဆေးထိုးပြီးနောက် လက်မောင်းအောင့်သလို ခံစားရပြီး၊ နောက်ရက် ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။
(၅) ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း (allergic reaction) ဖြစ်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံကို အမြန် သွားသင့်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြီး နိဂုံးချုပ်ပြီး ပုံမှန် အနေအထားပြန်ရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ‘ဆေး’ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် ဆုတောင်းနေပါတယ် ခင်ဗျာ
Previous post ဒါေတြ ကို တကယ္ လုပ္ပါ…. မင္းတစ္သက္လုံး ဘယ္ေတာ့ မွ မဆင္းရဲ ေစရဘူး
Next post မိုက္စား ႐ိုက္ ထား တဲ့ နန္းသီရိေမာင္ ရဲ႕ ဗီဒီယို ဖိုင္ေလး